About us | Phoe Phyu & Associates
Welcome to Phoe Phyu & Associates
ဖိုးဖြူနှင့်ရောင်းရင်းများဥပဒေအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းသည်မြေယာပြသာနာများနှင့် ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အထူးပြုအကျိုးဆောင်ပေးလျှက်ရှိသော ဥပဒေ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံနှင့် ဥပဒေသုတေသနလုပ်ငန်း၊
၅။ PESTLE & SWOT Analysis ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုလုပ်ငန်း
Phoe Phyu & Associates Law Firm isaprofessional one giving an advocacy specilized in land disputes and trade & commercial - business issues . Our law firm is offering the services in legal consultancy,legal plan,legal administration,legal advocacy and PESTLE & SWOT Analysis.
ဖိုးဖြူနှင့်ရောင်းရင်းများကုမဏီလီမိတက်သည်မြေယာဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခိုင်မာတိကျသောရပ်တည်ချက်များ ရှိပါသည်။ မြေယာအငြင်းပွား မှုများအတွက် မတရားသည့်ဥပဒေကို အာခံရန်၊ တရားမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုအံ့တုရန် ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန် ဦးတည်ပါသည်။
သာတူညီမျှမှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားခွင့် ရှိစေရမည်။
မိမိတို့အမှုသည်များ၏ အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ ဖော်ဆောင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
တရားစောင့်သောသူကို ထိုတရားက ပြန်၍ စောင့်၏။
ထို့အပြင် ဥပဒေအကျိုးဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့် နစ်နာသူအမှုသည်များနှင့် လက်တွဲပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဖိုးဖြူနှင့်ရောင်းရင်း များကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် ရိုးရှင်းတိကျသော မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ထားပါသည်။အဆိုပါ မဟာဗျူဟာအရ အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရန်၊ တရားမျှတမှုကို အရေးဆိုရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
မြေယာပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ဤဥပဒေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကို ရှေ့နေဦးဖိုးဖြူ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်၍ မြေယာ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းပေးနေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေယာအငြင်းပွားမှု ပြဿနာများအား အဓိက လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေယာဆုံးရှုံး နစ်နာမှုများအား ရာခိုင်နူန်းအများဆုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် လယ်သမားများအတွက် ဦးစားပေး အကျိုးဆောင်ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ မြေယာဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ခံစားနေရပြီး ဥပဒေအရလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရန်လည်း ငွေကြေးအားဖြင့် မတတ်နိုင်သည့် လယ်သမားများအတွက် သင့်တင့်သော ပညာရှင်ခဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မြေယာဆုံးရှုံးနေသည့် လယ်သမားများသာမက မတရားမှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ အမှုအခင်းများတွင်လည်း မေတ္တာဖြင့် လိုက်ပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
လုပ်ငန်း၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်သည် မတရားမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အားနည်းသောပြည်သူများဘက်မှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးရန် ဖြစ်ပြီး လယ်သမား ယာရှင်များအတွက် ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံပေးနေသည့် ဖိုးဖြူနှင့်ရောင်းရင်းများ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ရှေ့နေခပေးရန် အခက်အခဲရှိသူများကိုလည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုများ ကောင်းမွန်စွာပေးအပ်ရန် ဖိုးဖြူနှင့် ရောင်းရင်းများ ကုမဏီလီမိတက်မှ ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် အများပြည်သူတို့သည် ဥပဒေနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါက နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ရေရှည်တွင် ပိုမိုကာကွယ်မှု ရယူနိုင်မည်ဟု ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေယာပြဿနာဖြေရှင်းရေး ဥပဒေပညာပေး စာအုပ်များကိုလည်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အများပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်လို့ ဥပဒေပညာပေး စာအုပ်များ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် နစ်နာနေသော ပြည်သူများ ဥပဒေ၏အခွင့်အရေးနှင့် အကာအကွယ်ကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖိုးဖြူနှင့် ရောင်းရင်းများကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ အတွက် ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခိုင်မာတိကျသော ရပ်တည်ချက်များရှိပါသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား ခိုင်မာသည့်ဥပဒေ အကာအကွယ်ကို ရယူနိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေစီမံချက်(Legal Plan) များ ရေးဆွဲပေးလျှက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားတိုင်း သမာအာဇီဝကျသည့် မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆို တန်းတူ လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ပါဝင် စီးပွားရှာခွင့် ရရှိစေရမည်။
နိုင်ငံသားတိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ဥပဒေအရ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိစေပြီး ဥပဒေအရလိုက်နာရန် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျင့်သုံးစေရန် ဖော်ဆောင်သွားမည်။
မိမိတို့လုပ်ငန်း၏မိတ်ဆွေ၊စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားအလတ်စားလုပ် ငန်းရှင်များအတွက် တန်းတူစီးပွားရှာခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာယှဉ်ပြိုင်ခွင့်နှင့် တရားမျှတစွာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခွင့်တို့ကို ဖော်ဆောင်သွားမည်။
ဖိုးဖြူနှင့် ရောင်းရင်းများကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ဥပဒေအကျိုးဆောင်ပေးရာတွင် ထက်မြက်သောနည်းဗျူဟာရှိသကဲ့သို့ ခိုင် မာတိကျသော မဟာဗျူဟာများကိုလည်း ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးပါသည်။ ဖိုးဖြူနှင့်ရောင်းရင်းများ ကုမ္ပဏီလီမိတ်၏နည်းဗျူဟာသည် စမ်းချောင်းကလေးကဲ့သို့ အဆက်မပြတ် စီးဆင်းလုပ် ဆောင်နေပြီး မဟာဗျူဟာမှာ ကျောက်ဆောင်ကြီးကဲ့သို့ ခိုင်မာမှုရှိသည်ဟု တင်စားပြောလိုပါ သည်။ သို့သော် မိမိတို့လုပ်ငန်းအား အစွမ်းကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အချိန်ပြည့် အာရုံ စိုက်နေကြရသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ကျွန်ုပ်တို့သိစေလိုသည့် ဥပဒေအကျိုး ဆောင်မှုမဟာဗျူဟာမှာ အင်မတန် ရိုးရှင်းပါသည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် ထိရောက် မြန်ဆန်မှု ဖြစ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားများအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အထူး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်မျိုးချင်းအတွက် ဥပဒေသုတေသန ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်အရနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာပြဿနာများအရလည်း ဦးစားပေးသုံးမျိုးထားရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိနေပါသည်။ ပထမတန်းဦးစားပေးအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မြေယာများလျှောက်ထားခြင်းနှင့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းစာချုပ်များ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ချုပ်ဆိုခြင်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ဒုတိယဦး စားပေးအဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်သွယ်မှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း၊ စီးပွားကုန်သွယ် အငြင်းပွားမှုများကို ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ဥပဒေအကျိုးဆောင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အခွန်ကိစ္စများ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ တတိယဦးစားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စီးပွားလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စီးပွားကုန်သွယ်လျှောက်ထားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။